nepal – Page3– Tharu Community
आमरण अनसन बस्ने थरुहट मोर्चाको घोषणा !!!
१८ माघ, कैलाली । थरुहट थारुवान मोर्चाले फागुन १ गतेदेखि धनगढीमा आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार धनगढीमा … More आमरण अनसन बस्ने थरुहट मोर्चाको घोषणा !!! →
आमरण अनसन बस्ने थरुहट मोर्चाको घोषणा !!! February 1, 2020 ansan, morcha, nepal, strike, tharu, tharuwan	0No comments on आमरण अनसन बस्ने थरुहट मोर्चाको घोषणा !!!